Warbixin: Waa kuma Cabdisalaan Dhiidhiiyow Kabtanka Kooxda Puntland…? – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
• Laacibka ugu fiicnaa koobka aya loo badinayaa inuu noqdo C/salaan Dhiidhiyoow Kabtanka Puntland oo ah Xidiga kaliya ee xitaa taageerayaasha kale ee kasoo horjeeda ay u sacabtumaan.
• Sharciga wuxuu ahaa in Qof kasoo ciyaaray ama ka ciyaara hadaba Horyaalka Heerka kowaad ee Soomaaliya uusan ciyaari karin Koobka Maamul Goboleedyada.
• Waxaa la sheegay in C/Salaan uu 2009 u ciyaaray Xulka qaranka Soomaaliya, taas oo muran xoogan iyo dacwo laga keenay.
• Maanta Kooxda Jubba Land iyo Hiiran/Shabeelada dhexe ayaa warqado cabasho ah u gudbiyay xiriirka Soomaaliya, iyagoo weydiisanaya sababta ay u dhacday in Dhiidhiyoow oo xirtay maaliyadda Qaranka Soomaaliya uu ka qeyb qaadanayo koobkan.
• Wali Jawaab lama siin, waana sababta barito loo baajiyay in la qabto Finalka.
• Sidoo kale Waxaan la xiriiray Puntland, waxa ay ii sheegeen in wali aan lala soo hadlin.
• C/Salaan Dhiidhiyoow Wuxuu ahaa kabtankii Gobolka Sool ee koobkii Garoowe lagu dhigay 2010, Hadaba su’aasha waxa ay tahay Hadda maxaa loo qabsanayaa? oo 2010 maxaa loo qabsan waayay ileen 2009 ayuu xulka u saftee…!
• Jubba Land oo Finalka la ciyaareeysa Puntland waxa ay doonayaan in laga dhaadhiciyo Sheekadan lakin wali jawaab laguma soo celin, waxaana la ii xaqiijiyay in baaris xoogan ay ka socoto Xafiisyada Xiriirka Ciyaaraha Soomaaliya.
• Hadaba aan idin Sheego…! waxa ay u badan tahay in Dhiidhiyoow uusan ciyaari doonin Finalka kadibna Puntland lacago lagu ganaaxi doono marka ay soo dhamaato Finalka lakin OGOW Waa hadal-heyn uun…
• Haddii C/Salaan Dhiidhiyow uu seego Ciyaarta Finalka waxaa halis galeeysa rajada Koobka ee Puntland waayo waa geesigooda sanadkan.
Adiga Maxey kula tahay arintaan ?
Qore: Idiris C/qaadir
Previous: Warbixin: Sidee ayey Aftida Britain u saamaysay dhaqaalaha adduunka
Next: Xildhibaan sheegay in Ethiopian-ka lagala xisaabtamayo Xasuuqa ay ka geysteen Gobolka Baay